“သားသား ရယ် …. သနားပါတယ်။”
“မမ …. သားသားတို့အတူနေရအောင်နော်”
“သားသားရယ် မမ တို့တွေ မောင်နှမအရင်းတွေလိုအတူနေလာကြပြီးမှ အခုလိုပြောင်းလဲသွားလို့ကောင်းပါ့မလား”
“သားသား အခန်းထဲသွားရအောင်လေ ဒါဆိုလဲ”
“မမနို့လေးတွေကတင်းနေတာပဲနော်။” ဆိုတော့ မမတစ်ယောက်အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့တုံ့ပြန်လာတယ်။
“ပြွတ်ပြွတ်……………ပြွတ်… အား ကောင်းလိုက်တာမမရယ်။”
“တကယ်လား …. မမက သားသားကိုကလေးထင်နေတာ မဟုတ်တော့ဘူးပဲ”
“သားသားရယ် “ ဆိုပြီးပေါင်လေးကိုအတင်းစိကယ်လာတယ်။
“အ………………… နာတယ်သားသားရယ် …. မမ ကိုဖြေးဖြေးလေးပဲလိုးနော်”
“ကောင်းလားမမ … သားသားလိုးတာ”
“ဟင်း….. ကောင်လေးနော် ကိုယ်အမ ကို ဒီလိုပဲမေးရလား”
“မမ ရယ် …..အဲ့ လိုသဘောမဟုတ်ပါဘူး သားသားကမမ ကိုကောင်းစေချင်လို့ပါ”
“သားသား မမ ကိုလိုးတာ မမအရမ်းကောင်းတာပဲ”
“Sorry နော် မမ “
“သားသား မမ ပြီးတော့ မယ် လုပ်လုပ်”
“အ….အ…..အ…..အ….အား……………..အား…………….. သားသား မမ ပြီးပြီ …… အား…………….”
Posted by စိတ်​ကူးရင်​ စရာ​လေးများ at 5:10 AM